Fanaraha-maso fanaraha-maso | Reef Resilience
Mila teknika manokana ny fanaraha-maso ireo mpiorina haran-dranomasina satria kely sy sarotra hitan'ny maso hatramin'ny herintaona ireo vatohara tanora ireo. Ny fandinihana ny substrate dia mety misy fanelingelenana azy koa, ka misy ny fifanakalozana eo amin'ny fampahalalana azo avy amin'ny fanaraha-maso sy ny fanelingelenana ireo mpiasa kely sy marefo. Noho izany, ny programa fanaraha-maso dia tokony hodinihina tsara ary tokony hifanaraka amin'ny tanjona sy tanjon'ny tetikasa. Paikady iray ny fanaraha-maso ny haran-dranomasina aorian'ny herintaona rehefa nitombo ny haben'ny mpiasa. Raha tsy izany, raha ilaina ny famahana ny mombamomba ireo velona, ​​dia misy jiro UV manga manampy ny fitadiavana haran-dranomasina kely, saingy tsy azo atokisana tanteraka satria ny vatohara sasany dia tsy mandeha fluoresce matetika rehefa mandeha ny fotoana ary misy zavamiaina kely tsy vato harana.
Ny fanaraha-maso ny vatohara dia niorina tamin'ny famolavolana tariby nampiasa ny jiro UV sy ny boaty mainty. Sary © Kelly Latijnhouwers / SECORE International
Raha mampiasa hazavana manga ianao, dia mila 'boaty maizim-borona' ilaina mba hampidirana ny vodiny mba handinihana fa ny fluorescence dia hita mibaribary ao anatin'ny tontolo maizina. Azo alaina na mety tsy ho azo atao ny manangona fantsom-pialan-tsasatra ho an'ny fanadihadiana, ka amin'izany dia mety ho toy ny 'boaty matevina' be dia be ny kofehy PVC lehibe. Matetika ny olona maty an-tapitrisany no mibaribary mandritra ny volana vitsivitsy monja taorian'ny nanamboarana azy. Na izany aza, raha mitohy ny taham-pahafatesana avo lenta toy ny vatohara hitombo ho lehibe kokoa, ny fanaraha-maso dia mety ho fomba mahomby hamaritana ny antony sy mety ny fampifanarahana ilaina amin'ny famolavolana metodolojia na ny fifantenana ny habaka.
Hizaha fitsipika momba ny fanaraha-maso bebe kokoa zanatany haran-dranomasina tsy voatanisa, vokatry ny famerenana amin'ny laoniny amin'ny toerana, fanombanana ny faharetan'ny haran-dranomasina, ary ny fampandrosoana ankapobeny fanaraha-maso ny planina.
Ny mpitsoa-ponenana Coral dia tena kely, ka sarotra be ny mahita sy manisa.
Ny fanaraha-maso ny haran-dranomasina kely eo amoron-dranomasina dia misy fikorontanana kely, izay tokony horaisina ho toy ny varotra miaraka amin'ny vaovao azo avy amin'ny fanaraha-maso.